بهترین کانال های تلگرام آموزش زبان انگلیسی ؛ صفر تا صد زبان با تلگرام! - مجله خبری ای بی سی مگ
Ny fianarana teny iray dia iray amin’ireo zava-dehibe indrindra amin’ny olona tsirairay eo amin’ny fiaraha-monina ankehitriny. Miaraha amin’i Tekrato amin’ny fampidirana ireo fantsona Telegram fampianarana teny anglisy tsara indrindra.
Ny teny anglisy tokoa dia fiteny manerantany. Noho ny fahatsorana sy ny fahaizan’ity fiteny ity ary ny fampiasana azy any amin’ny firenena maro eran-tany, ity fiteny ity dia lasa iray amin’ireo fiteny be mponina indrindra eran-tany, ary tsy any Angletera sy Amerika ihany fa any amin’ny firenena Afrikana sy Amerikana maro. . Ankoatra izany, ny teny anglisy no fiteny faharoa amin’ny fiarahamonina sy firenena maro hafa.
Iray amin’ireo zavatra ilaina amin’ny maha-maoderina amin’izao tontolo izao ankehitriny ny hahafehy na hahazatra ny tsirairay amin’ny fiteny iray, fara fahakeliny, ankoatra ny fitenin-drazany. Ho fanampin’ny maha-fitaovana fifandraisana mahomby, ny fiteny dia manana karazana fampiharana ara-tsiansa sy fandalinana, ary ny mpikaroka amin’ny sehatra rehetra dia hanana fianarana midadasika kokoa raha toa ka mahay fiteny hafa izy.
Misy fomba maro hianarana teny anglisy amin’izao andro izao. Raha toa ka ivon-toeram-piofanana fiteny sy kilasy mifanatri-tava no hany toerana hianarana teny anglisy, ny sasany amin’izy ireo dia ratsy kalitao ary mandany vola be, amin’izao andro izao, noho ny tontolon’ny teknolojia, fampiharana isan-karazany, rindrambaiko ary kilasy. Misy an-tserasera ho an’ny fianarana fiteny.
Ny sarin’ny vehivavy miboridana ao amin’ny Telegram dia alefa amin’ny alàlan’ny faharanitan-tsaina artifisialy!
Raha ampitahaina amin’ny fahasamihafan’ny tontolon’ny fanabeazana, ny fomba fampianarana fiteny dia niaina fahasamihafàna sy fahamaroana manokana nandritra ny folo taona fara-fahakeliny. Raha toa ka niara-niasa tamin’ny boky Oxford sy ny toy izany ny hany fitaovana fianarana teny, amin’izao andro izao dia manandrana manindrona ny antony manosika hianatra amin’ny mpihaino azy ireo mpampianatra anglisy amin’ny fomba isan-karazany, amin’ny lafiny sasany mifangaro amin’ny fahafinaretana sy ny fahafinaretana.
Anisan’ny paikady vaovao amin’ny fianarana teny, ohatra, ny fampiasana mozika sy sarimihetsika amin’ny fanabeazana izay tsy nisy niraharaha firy hatramin’izay.
Ny fantsona telegrama fampianarana teny anglisy tsara indrindra
Niharihary tamin’ny olona maro ny filàna fianarana teny anglisy nandritra ny taona maro. Amin’izao andro izao, ny sehatry ny fianarana, ny asa ary ny fialam-boly maro dia hiroso amin’ny fahaizana anglisy kely indrindra. Tsy mila mahay teny anglisy ny olona amin’ny asany mahazatra sy andavanandro amin’ny finday, solosaina ary solosaina finday.
Na dia manoro hevitra aza ny mpikaroka fa ny fotoana tsara indrindra hanombohana fianarana fiteny faharoa dia alohan’ny faha-10 taonany, ny fianarana fiteny iray dia tsy midika hoe taona na toe-javatra iray.
Araka ny voalazanay teo aloha dia tsy maintsy mahafantatra ny teny anglisy ho iray amin’ireo fiteny be mpampiasa indrindra eran-tany ankehitriny ianao. Na dia mahomby kokoa sy tsara kokoa aza ny fototry ny fianarana hatramin’ny fahazazana sy ny fahatanorana, ‌ fa amin’ny taona sy ny toe-javatra rehetra dia afaka manomboka mianatra teny anglisy ianao.
Azonao atao ihany koa ny mijery ireto lahatsoratra manaraka momba ny fampianarana fiteny ireto:
Ankoatra ny fampiharana fiteny manokana, rindrankajy, ary podcast izay natokana ho an’ny famerimberenana sy lahatsoratra, inona no vahaolana hafa sy sehatra tsotra kokoa ho an’ny fianarana fiteny tonga ao an-tsainao? Izany indrindra no tiako horesahina aminareo anio. Fianarana fiteny amin’ny alalan’ny telegrama. Amin’ny fantsona telegrama fampianarana teny anglisy tsara indrindra vitantsika ny maka tahaka Miaraka.
Ity manaraka ity dia lisitr’ireo fantsona telegrama fampianarana teny anglisy tsara indrindra, toy izao manaraka izao:
Channel sy coding channel
Aza alaina sary an-tsaina fa miatrika dika mitovy amin’ny fantsona telegrama ianao. Vakab Coding, araka ny hevitro, dia iray amin’ireo fantsona telegrama fampianarana teny anglisy tsara indrindra, izay manana ny fanohanan’ny ekipa mazoto sy mahay.
Manana mpikambana 180,000 eo ho eo ny klioba coding ao amin’ny Telegram ary manana pejy Instagram ihany koa. Fiofanana samihafa sy fomba manokana no tena mahasarika ity fantsona telegrama ity. Fanampin’izay, manao seminera mifanatrika ho an’ny mpianatra teny ihany koa ny ekipan’ny coding.
Ampidino ary avereno jerena ny lalao Wiwo; Fianarana teny anglisy samihafa miaraka amin’ny lalao
Fampianarana teny Iranmehr
Ity fantsona ity dia manohana ny karazana atiny rehetra ary havaozina isan’andro. Ato amin’ity fantsona ity, ny fahasamihafana misy eo amin’ny Anglisy Amerikana sy Britanika, teny, ohabolana, teny vaovao, teny nalaina avy amin’ny olo-malaza, votoaty mandrisika, lahatsoratra fanabeazana ao amin’ny tranokalan’i Iranmehr, horonan-tsary mandrisika sy fanabeazana, lesoka mahazatra amin’ny teny anglisy, teny mifanipaka sy mifanipaka ary… .
Na dia isan’andro aza dia misy lahatsoratra antsoina hoe “Word of the Day” ampiakarina amin’ity fantsona ity, izay, tahaka ireo rakibolana malaza sy malaza eran’izao tontolo izao, dia mampiditra teny vaovao aminao. Mazava ho azy fa tsy mampiditra ny teny amin’ny sary tsotra fotsiny izy io, amin’ny teny hafa, manazava ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny teny vaovao, ary mampahafantatra anao ny fomba fanoratana phonetika sy ny fanononana azy.
Mianara teny anglisy
Iray amin’ireo fantsona fianarana teny anglisy be mponina indrindra misy mpikambana 220,000 mahery. Ity fantsona telegrama ity dia manana lahatsoratra fanofanana maro. Azo zaraina ho fizarana telo ny votoatin’ity fantsona ity.
Ny fantsona tsara indrindra amin’ny teny anglisy hatramin’ny voalohany
Ny ampahany voalohany dia fomba fiteny anglisy, ny tapany faharoa dia teboka gramatika ary ny ampahany fahatelo dia ny dikan’ny teny. Ny iray amin’ireo tsikera amin’ity fantsona ity dia ny lahatsoratra dokam-barotra sy fanasana maro handray anjara amin’ny fampianarana.
Iray amin’ireo fantsona telegrama fampianarana teny anglisy tsara indrindra misy mpikambana mavitrika maherin’ny 15,000 ny fantsona anglisy Twilight. Ity fantsona ity dia manolotra votoaty isan-karazany eo amin’ny sehatry ny fitsipi-pitenenana, lexicography ary resaka ho an’ny mpampiasa azy.
Ny fantsona English of the Day misy mpikambana maherin’ny 20,000 dia iray amin’ireo fantsona telegrama fampianarana teny anglisy tsara indrindra. Ho fanampin’ny mpianatra fiteny, ity fantsona ity dia loharano lehibe ho an’ny sekoly sy mpampianatra, ary mampianatra anao teny, andian-teny ary matoanteny vaovao isan’andro.
Soso-kevitra sy fitaovana anglisy
Raha mila fanazavana fanampiny sy fahalalana, misoratra anarana fotsiny amin’ny fantsona English Tips and Tools. Ity fantsona isan’andro ity dia mampianatra teny anglisy vaovao, fitsipi-pitenenana ary andian-teny amin’ny resaka. Raha te hampihena ny hadisoanao amin’ny fitsipi-pitenenana ianao dia ataovy izay hisoratra anarana amin’ity fantsona misy olona 30.000 ity.
Tany Idiom Anglisy
Araka ny hevitr’ilay anarana, ny fantsona fanofanana English Idioms Land dia tena ahitana fomba fiteny sy fomba fiteny ampiasaina amin’ny resaka anglisy isan’andro. Ny hevitr’izy ireo dia voasoratra eo akaikin’ny teny tsirairay. Misoratra anarana amin’ity fantsona ity amin’ny alàlan’ny rohy manaraka.
Manana olana ara-pitsipi-pitenenana ve ianao ary na manao ahoana na manao ahoana ny fiatrehanao azy ireo, dia mbola misy maningana izay mampitomany anao? Ity misy vahaolana ho anao. Afaka misoratra anarana amin’ny fantsona Grammarfy ianao. Amin’ity fantsona ity dia ampianarina ny fitsipi-pitenenana, ny lafiny, ny rafitra ary ny fanavahana rehetra.
Anglisy ho an’ny rahampitso
Ny fantsona anglisy ho an’ny rahampitso dia fantsom-panabeazana malaza be ho an’ny mpianatra teny, mpampianatra ary mpampianatra teny anglisy mihitsy aza. Ity fantsona ity dia hanampy anao hianatra teknika teny anglisy tsara kokoa ary hanamafy ny fahaizanao. Amin’ny alàlan’ny famandrihana amin’ity fantsona ity dia azonao atao ny manamafy ny fahaizana teny anglisy efatra fototra. Koa faingàna ary misoratra anarana amin’ity fantsona ity.
Ny fantsona fampianarana teny anglisy tsara indrindra hatramin’ny voalohany
Mba hanamafisana ny fahalalanao fototra amin’ny teny anglisy dia afaka mahazo fanampiana amin’ity fantsona ity amin’ny Internet ianao. Amin’ny alàlan’ity fantsona ity dia afaka mianatra lesona isan-karazany amin’ny Internet ianao ary mahazo vokatra mahagaga.
Ity fantsona ity miaraka amin’ny anarany sariaka dia manome traikefa tsara ho anao amin’ny fianarana teny anglisy. Mazava ho azy fa ny traikefa amin’ny taranja rehetra dia mitondra fahombiazana, ary ny mianatra teny anglisy dia tena sarobidy ny mandre ny traikefan’ny hafa.
Raha liana amin’ny fianarana teny anglisy amerikana ianao, ity fantsona fampianarana ity dia sehatra tsara ho anao. Ity fantsona ity dia manolotra lahatsoratra isan-karazany, teny nalaina ary tantara fohy izay mampianatra ny fitsipiky ny teny anglisy amerikana. Raha ny marina, ireo hevitra aseho ato amin’ity fantsona ity dia mampitombo ny fahalalanao amin’ny fomba samihafa. Afaka mampitombo ny fahalalanao ianao ary mankafy ny famakiana ireo tantara ireo.
Miaraka amin’ny BBC English, azonao atao ny manatsara ny fahaizanao miteny anglisy ary manatsara ny fahalalanao ny anglisy anglisy. Havaozina tsy tapaka ny atiny rehetra ato amin’ity fantsona ity. Noho izany dia azonao atao ny manamafy ny teny, ny fanononana, ny fitsipi-pitenenana ary. Koa misoratra anarana amin’ity fantsona ity
Ny fantsona kafe amin’ny fiteny misy mpikambana mavitrika maherin’ny 9.000 dia fantsona malaza sy mahomby amin’ny sehatry ny fampianarana teny anglisy ao amin’ny Telegram. Ny votoatin’ity fantsona ity amin’ny ankapobeny dia hita maso ary aseho amin’ny mpampiasa amin’ny endrika isan-karazany.
Fampiharana fianarana fiteny